Wararka | Arimaha Bulshada
Ardayda maleysia waxkabarata
May 21, 2008 at 12:01 pm | Posted in Wararka | Leave a comment
Ardayda Somaliyed ee Malesiya oo dhibaatooyin xoogan kala kulmaya Waxbarashadooda kadib markii .
Arday Soomaaliyeed oo Waxbarasho u soo doontay Dalka Maleesiya ayaan badankood ku guuleeysan inay helaan kadib markii ay caqabado badan isku hor gudbeen.
Hungoow Ardayda Soomaaliyeed ee dalka Maleesiya ku soo qulqulaya badankood ay la kulmaan ayaa lagu sheegay,fikrada qaldan oo ay ku tagaan maleesiya,waxaana laga xusi karaa in lagu marya habaabiyay sheekooyin oranaya,waa lacag la’aan jiifka iyo Waxbarashada Maleesiya.
“Waxaa naloo sheegay in jiifka iyo waxbarashada lacag la’aan yihiin laakiin markii aan nimid,waxaa nagala xareeystay baasaboorka,waxayna naga maree,xageen talo
u ciirsanaa,oo waxba islama heyno”ayuu ku calaacalay wiil Soomaaliyeed oo sheegay inuu Waxbarashad aad u jecel yahay.
Arday Waxbarasho u doonatay Dalka Maleeshiya ayaa guryahooda ku xaniban sababa la xiriira iyaga oo baasaboorkoodii uu ka dhacay,walina aan helin International Student Card,waxayna ka cabsi qabaan in la xiro,hadii ay dibada uga baxaan xaafadahooda,maadama aysan sharciga deganaanshaha iyo kan ardaynimadaba heysan.
arday kabid ah ardayda wax kabarata kuleejka kastuuri ayaa tilmaa sidaan isagoo muro ay kamuuqato kuna han jabaya inuu dalkii kulaabayo.
Arday ka tirsan Kuleejka Kastuuri ee Maleesiya ayaa ku dhaliilay gudigga ardayda Puntland inay iska indha tireen,wax ka qabashada xaaladaha murugsan ee ardayda reer Puntland,wuxuuna isaga Waagacusub u sheegay inuu degaankiisii dib ugu laaban doono.
Dhibaatada ugu badan ee heysata ardayda Maleeshiya ayaa loo tiriyaa waalidiintooda oo laga dhaadhacsiiyay qodobadaan:-
1. Maciishada wadanka oo ku kaafin karta celcelis 200$ ilaa 300$(Bishii Biil ahaan lixdii) oo Waalidka loo sheego inay ku filaan karto 50 $ si uu waalidku u fududeysto soo dirista ardayda una qaato in maciishada Wadanka ay sidaas tahay.
2. Iyadoo ardayda laga qaato lacago kale aan jirin sida (Transit Visa Fee ) oo aan aheyn tan caadiga ah ee waxbarashada, eyna sidoo kale dhacdo in ardayda lacagta waxbarashada looga soo qaado wadanka oo aanan la siin kulejyada Jaamacadah.
3. Iyadoo lagu mihiyo ardayda Waxbarasho lacag la’aan ah iyo Hooy sidoo kale lacag la’aan ah. Marka uu ardaygu yimaadana intaba uusan helin. Sidaasna aan lagu helin waxbarasho lacag la’aan ah. Iyo hooy lacag la’aan ah.
4. In uu qabaanku ka been sheego ardayga uu soo lug gooyey waalidkana lagu diro, kadibna uu ardaygu wadanka ku dhibaatoodo kuna biil beelo.
5. In uu Qabaanku had iyo jeer ardayda airportka uu dokumintiyada (baasaboorada iyo tigidyada) uga qaado. Uu u dhiibo kolejka ama Jaamacada. Isla markaana ardayda sicir uusan filaneyn loo sheego, uuna Wadanka sharci daro kumaro iyadoo ay halis tahay in la qabto. Qabaankuna uu ka dansado telefonada una gooyo intuu la balamo,isagoo lacagta uu ka qaadey ardayga uu tigid Somalia ah ku goosto, kuna laabto wadanka, keenana arday kale isla sidii oo kale isagoon kuwii hore meelna ku ogaan.
6. Si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hada cid ka hadashay majiraan iyadoo ardayduna ay tilmaameen in ay mudaharaad ay arintaas oga cabanayaan ay sameyn doonaan.
Saciid Cabdulaahi Kulmiye NADAARA
KUALA LUMPUR -MALESIA
Nabsi Iyo Naruuro Jaceyl.
Doorashada Turkiga: Erdogan oo mar labaad ku guuleystay madaxweynanimada dalkaasi Turkiga June 24, 2018